Accueil > Gazetin'ny nosy > Antananarivo dibo-drano : Tompon’andraikitra ireo fitondrana nifandimby
Mbola mitàna ny sain’ny mponina ny orambe nikija, ny alatsinainy lasa teo, izay naha dibo-drano ny ankamaroan’ny faritra eto Andrenivohitra. Nitondra takaitra ratsy izany satria olona folo no namoy ny ainy, ary maherin’ny roa arivo sy iray alina no traboina tsy manan-kialofana raha ny tatitra farany navoakan’ny BNGRC.
Lasa miteraka ady hevitra be eto amin’ny firenena moa ity fiakaran’ny rano be loatra teto Andrenivohitra ity. Ireo mpiara-dia sy mpanohana ny fitondrana mijoro ankehitriny dia milaza fa ny mponin’Antananarivo mihintsy no tompon’andraikitra raha dibo-drano ny tanàna satria manary fako any anaty tatatra sy lakandrano. Etsy ankilany, ho an’ny mpanohitra sy ireo tsy mankasitraka ny fitondrana dia ireo mpitondra amin’izao fotoana no tompon’andraikitra feno satria tsy nitady vahaolana hisorohana izany fa variana amin’ny zavatra tsy laharam-pamehana.
Ady hevitra diso izany satria na inona na inona ambara, dia tompon’andraikitra avokoa ny fitondrana rehetra nifandimby teto raha mora dibo-drano ny tanànan’Antananarivo vao misy orambe mikija. Voalohany aloha dia ny drafi-panajariana (plan d’urbanisme) eto Antananarivo mihintsy no tsy nandeha tamin’ny laoniny tao anatin’ny 62 taona niverenan’ny fahaleovantena. Betsaka ny fitondrana nifandimby teo fa tsy nisy nieritreritra ny hanao foto-drafitrasa goavana hisorohana ny fiakaran’ny rano eto Andrenivohitra kanefa mihazakazaka ny fitombon’ny mponina. Tsy nisy rahateo koa ny politikam-pifindramonina mazava sy maty paika, hany ka tsy mahagaga raha mirohitra mifindra monina eto Andrenivohitra daholo ny olona any ambanivohitra sy any amin’ny Faritra.
Ankaotra izay, samy miaiky daholo ny rehetra fa anisany tena fositra mahatonga an’Antananarivo ho mora dibo-drano ny fisian’ny fanotorana tany tsy ara-dalàna sy fanorenana trano amin’ny toerana tsy tokony hanaovana izany mihintsy. Mazava ho azo fa matoa nisy foana izany hatramin’izay dia misy ny firaisana tsikombakomba amin’ireo mpitondra fanjakana izay manome ny fahazoan-dàlana hanototra sy hanorina. Noho izany, tsy afaka miala bala mihintsy ny mpitondra ankehitriny satria manana anjara andraikitra amin’izao zava-misy eto Andrenivohitra izao ny fitondrana rehetra nifandimby teo.